Mbekisise umuntu wesifazane kuqala | News24
Mbekisise umuntu wesifazane kuqala
MHLELI: Akengisike elijikayo ngezinto engizifundile ngabantu besifazane. Ungabomlobola umuntu wesifazane one zingane zo munye muntu ngoba uthi bahlukene.
Uma wenze njalo uyothi uyabona sebebuyeleni wena ucabanga ukuthi balungisa indaba yezingane kanti sekungaphezu kwalokho. Sebelungisa nokwabo.
Okwesibili uma ufuna ukuba nengane nomuntu wesifazane mbheke kuqala ukuthi ukulungele yini ukuthi angakwazi yini ukukhulisa ingane. Mbheke ukuthi uyakwazi yini ukuzinakekele yena uqobo ngoba uma engakwazi ukuzi nakekela yena angamnakekela kanjani omunye umuntu.
Qaphelani bantu besilisa ukuthi obani eniba nezingane nabo ukuze nigweme ukuthi izingane zikhule kanzima.frm sphamandla ngubane eHOPEWELL